Wararka - Waa maxay shaandhaynta keega ama sifaynta buundada ee dharka shaandhada ee saxarada shaandhaynta?
Naga soo wac:+86 18679002828
Shaandhaynta dareeraha ah
Waa maxay shaandhaynta keega ama shaandhaynta buundada ee dharka shaandhada ee saxarada filter?
Sida aan ognahay, doorashada dharka shaandhada ku habboon, waa inaan ku darnaa xogta xalka oo ay weheliso dharka shaandhada.
Haddii cufnaanta marada shaandheynta ay aad u sarreyso, taasoo keeni karta in wax soo saarka uu yaraado oo saameyn ku yeesho awoodda saxaafadda shaandhada, taas oo keeni karta in aysan heli karin keega shaandhada leh nuxurka qoyaanka qaarkood waqti go'an, qaar xitaa ma heli karaan keega oo had iyo jeer noqo xaalad slurry.
Haddii cufnaanta dharka shaandhada ay aad u hooseyso, taas oo keeni karta dhibaatada daadinta dabcan.
Halka marka aan dooranno dharka shaandhada ku habboon, laakiin sababta sida caadiga ah shaandhada weli wasakhaysan bilawga marka aan beddelno dharka cusub ee shaandhada?Oo ifafaale this waa badan oo ka dhacaya gaar ahaan qaar ka mid ah daawaynta xal qurub ganaax.
Taasi waa sababta oo ah marxaladda koowaad, walxaha shaandhada kaliya waxay soo ururin karaan qaybo leh cabbir ka weyn cabbirkooda furan, sidaas darteed qaybaha yaryar ayaa dhaafi doona oo shaandheyntu waa wasakh, kuwaas oo u baahan inay dib ugu soo noqdaan wareegga quudinta.
Laakiin marka qaybo badan oo ka mid ah la ururiyo, waxaa jiri doona lakab keega ah oo u dhexeeya xalka cusub ee quudinta iyo dharka shaandhada kaas oo caawin kara sifeynta, dhacdadan waxaan u yeernay shaandhaynta buundada ama shaandhaynta keega.Waqti yar ka dib, sifeeyaha ayaa nadiifin doona, had iyo jeer wuxuu heli karaa keega shaandhada saxda ah sida la codsado.
Macluumaad kasta oo dheeraad ah oo loo baahan yahay xalalka shaandhaynta, iyada oo aan loo eegin maro shaandhaynta ama saxarada shaandhaynta, waxaad xor u tahay inaad la xidhiidho Zonel Filtech!
Waqtiga boostada: Jan-06-2022
Wixii su'aalo ah oo ku saabsan alaabtayada ama liiska qiimaha, fadlan emailkaaga noogu dhaaf waxaana kula xidhiidhi doonaa 24 saacadood gudahood.Weydiin
Cinwaanka Xafiiska:Qolka 1903 ~ 1905 ee Dhismaha 4, Baolong City Plaza, Zhonglou, Changzhou, Jiangsu, Shiinaha
Cinwaanka Warshada:No.19 ee Waddada Xi Taihu, Aagga Horumarinta Dhaqaalaha ee Wujin, Jiangsu, Shiinaha.
Taageerada Farsamo:+86 18679002828